ओली–प्रचण्डबीच बालुवाटारमा तीन घण्टा गोप्य वार्ता, नेता कार्यकर्तालाई चकित पार्दै के भयो सहमति ? — Sanchar Kendra
ओली–प्रचण्डबीच बालुवाटारमा तीन घण्टा गोप्य वार्ता, नेता कार्यकर्तालाई चकित पार्दै के भयो सहमति ?
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच करिब तीन घण्टा ‘गोप्य वार्ता’ भएको छ । नेकपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको हो ।
दुई नेताको छलफलपछि पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी भएको एक नेताले बताए । आफूले वान टु वान वार्ता गरेपछि अध्यक्षहरुले महासचिव पौडेललो बालुवाटार बोलाएका थिए ।
दुई अध्यक्षबीच नेकपाको एककता बाँकी कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषय र सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने बजेट, पछिल्लो समय सरकारप्रति भइरहेको आलोचना, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि लगायका विषयमा छलफल भएको बताइन्छ ।
पार्टी एकता भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पोलिटब्युरो गठन हुन सकेको छैन । त्यसको निश्चित समय पनि नेताहरुले तोक्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, केन्द्रीय विभागहरुको पदपूर्ति गर्ने काम पनि हुन सकेको छैन ।
केन्द्रीय सदस्यहरु पनि जिम्मेवारीविहिन अवस्थामा छन् । नेताहरुबीच चाँडै सचिवालय बैठक बोलाएर यी विषयहरु टुंग्याउने बारेमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
उनीहरुबीच मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका विषयमा पनि छलफल भएको बताइन्छ । पछिल्लो समय ल्याइएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक विवादमा परेपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । त्यसमा कसरी सुरक्षित अवतरण गर्ने भन्ने बारेमा पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको हो ।
यसैबीच उक्त पार्टीका विद्यार्थी नेता रञ्जित तामाङ सहसंयोजकको जिम्मेवारीमा बस्न तयार भएका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्र सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रहेका तामाङले एकतापछि पनि विद्यार्थी संगठनको संयोजकमा दाबी गर्दै आएका थिए ।
तर, पार्टीले तत्कालीन अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरलाई संयोजक बनाएर तामाङलाई सहसंयोजकको जिम्मेवारी दिएपछि उनले आफ्नो अपमान भएको भन्दै राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए ।
बुधबार भने गृहजिल्ला झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तामाङले अब सहसंयोजककै जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने बताए । उनले भने- ‘म मेरो जीवन नै त्याग गरेर, मेरो आदर्श नेता प्रचण्डले देखाएको बाटोमा अघि बढेको थिएँ, पद त्याग गर्नु के ठूलो कुरा भयो र ।’
‘शैक्षिक रुपान्तरण, जनजिवीका, राष्ट्रियताको मुद्दा समातेर एक वर्षभित्र अधिवेशन गर्ने मेरो स्पिरिट हो,’ तामाङले भने, ‘म त्यसैअनुसार पार्टीले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै संगठनमा क्रियाशील हुन्छु ।’
उनले अरु जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व विधि प्रक्रियाअनुसार नै टुंगो लगाइए पनि विद्यार्थीमा भने त्यसविपरित भएको दोहोर्‍याए । ‘निर्णय चित्तबुझ्दो नभएपछि म राजीनामा पत्र लिएर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाउन गएको थिएँ । उहाँले तपाईंलाई अन्याय परे पनि एकताका लागि त्याग गरेर युवा विद्यार्थीलाई सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ भन्नुभयो,’ तामाङले भने ।
यस्तै प्रचण्डसँग र बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागकी मन्त्री बरोनस सगबीच पनि भेटवार्ता भएको छ । ललितपुरको खुमलटारस्थित निवासमा भएको भेटमा नेपालको वर्तमान राजनीति र आर्थिक समृद्धिका बिषयमा छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको र आफूहरु आर्थिक समृद्धिका लागि अगाडि बढेको बताए । ‘आर्थिक विकासका लागि हामीलाई धेरै प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले हामीले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी वर्तमान सरकार र पार्टीले व्याबहारिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं’ उनले भने ।
प्रचण्डले देशमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि वर्तमान समय उचित रहेको बताउँदै कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको औल्याए । बेलायतकी मन्त्री सगले नेपालमा महिलाहरुको राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा भएको सहभागिताले आफू अत्यन्त प्रभावित बनेको बताइन् ।
यता सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कूटनीतिक मर्यादामा बस्न अमेरिकी राजदूतलाई सचेत गराएका छन् । ‘जनतासँग गफगाफ’ संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरी विवादमा परेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत यसो नगर्न आग्रह गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पनि राजदूतको योजनाबारे असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘सबैले कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि सबैले गरुन भन्ने चाहनेले पालना गरेर देखाउनुपर्छ’ सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेता नेपालले भने । नेकपाकै अर्का नेता भीम रावलले राजदूतले नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा संवाद गर्ने गतिविधि गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले पनि सरकारको अनुमतिविना राजदूतले जनतासँग प्रत्यक्ष कार्यक्रम गर्न नमिल्ने बताए । अमेरिकी राजदूत बेरीले आगामी सोमबारबाट ‘राजदूतसँग गफगाफ’ नामक संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।
एकदिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए चिनियाँ रक्षामन्त्री, काठमाडाैंमा क-कसलाई भेटे ?
यस्ता छन मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय, हेर्नुहोस बिस्तृतमा
काठमाडाैंमा कोरोना संक्रमण झनै बढेपछि ओली सरकारले बल्ल चाल्यो यस्ताे कदम, अब उपत्यकावासी के गर्लान ?